Folding Machine Manufacturers & Suppliers | China Folding Machine Factory
MANUAL STEET METAL Bender FROM HOTON MACHINE DZICHIBUDA: 1. zvakarurama Kumbofungatira Our muchina FSMS2020 / 2 ane rinorema mhando. 2. Its yokumusoro chipande inogona zvachose akapeta. 3. chokushandisa Chimiro zvakakodzera processing bhokisi serin'i basa zvidimbu. 4. Kumbofungatira muchina muviri wedu zvakarurama ine simbi yairema nomoto mamiriro. 5. Lever nokuti swivel kwebasa vachikotama danda 6. MAIN Technical PAR ...
Folding Machine PBB2020 / 1,2
METAL vakafugama MACHINE DZICHIBUDA: 1. Vane mashandiro mhepo chitubu anogona kuiswa mukati ruoko (optional) 2. With rutsoka kuzvidzora, Zviri nyore kuti nokushanda uye kuzorora maoko. 3. zvakarurama Kumbofungatira muchina Our PBB serials, ine chitiviri mamiriro. We vakashandisa nokuda bvumidzwa kudzivirirwa kumba. 4. zvakarurama Kumbofungatira Our muchina unoshandiswa kuti vaikunga jira simbi. Yokumusoro chipande ...
Pan AND bhokisi Kumbofungatira Machines ZVIRI: 1.For kuumbwa chikamu vachikotama. 2.A zvakazara welded chimiro, uye chiine yepamusoro engineering, nechokwadi shoma Nokuraramisa, pamwe nyore uye njodzi oparesheni. 3.Have mashandiro mhepo chitubu anogona kuiswa mukati ruoko (Zvingakudetsera). 4.Adjustable vakafugama angled kugumira pamwero kusvika 135 ° 5.With rutsoka kuzvidzora. Zviri nyore kuti nokushanda uye rel ...
Lathe Machine , vakafugama Machine , Sheet Metal Machines , Metal Lathe , Lathe , Bar Bending Machine ,